Keddib codsigaada magangelyo waxa lagu siiyay oggolaasho joogitaan. Waxa aad rabtaa in Nedeland la’iskugu kiin keeno adiga iyo xubna qoyskaada oo waddamada dibadda ku sugan. Markaa waa in aad codsiga isku keenista qooyska aad dalbataa. Boggaan waxaan si gaaban ugu sharxeynaa shuruudaha codsigaa ku xiran, sida uu geedisocodka codsiga u hirgalayo iyo maxaad adiga sameyn kartaa si geedisocodkaa codsiga si wacan uu u hirgalo.
Waxaa mudadaan aan ku jirno ay Ururka qaxootiga caawiya VluchtelingenWerk jooga AZC yada aad ayey mashquul u yihiin. Sidaa awgeed muddo dheer ayey qaadan kartaa ilaa aan ku caawini karno. Waxaan kaa codsaneynaa inaa xaaladan nala fahanto.
Xubnee qoyska ka tirsan ayaa taa xaq u leh?
Ma tahay 18 sano jir ama ka da’weyn tahay mana leedahy oggolaasho joogitaan oo magangelyo? Markaasi waxa aad xubna qoyska oo soo socda u codsan karta isku keenista qooysaka:
xaskaada ama ninkaada oo da‘ qaangaar ah jira ama qofka aad nolosha la wadagto oo aydan is guursan balse aad xiriir dheer oo idiin gaar ah la leedahay. U fiirso: ma leedahay in ka badan hal qof oo aad (qabto) nolosha la wadaagto ? Markaas hal qof oo aad nolosha la wadaagto oo keli ah ayaad keensan kaartaa iyo carruurta aad qofkaasi wada dhasheen.
Ilmahaada oo da’yar, ama ilmaha qofka aad nolosha wadaagtaan oo qoyskiinna ka tirsanaay. Taasi waxa ay quseeysaa ilma aad dhashay iyo xitaa kuwa sidig kugu ah- ama kuwa aad koriso. Iyo xitaa ilmaha da’ qaan gaar ah oo weli qooyskaada ka mid ah, oo aan guursan aana lahayn wax xiriir ah, kawaasina xaq ayeey u leeyihiin.
Geynta codsiga isku keenista qooyska ee magangelyo waa mid lacag la’aan ah.
Ma ka yartahay da’da 18 sano jir?
Hadii ay da’daada 18 sano jir ka yartahay laguna siiyo oggolaasho joogitaan oo magangelyo, markaa waxa aad isku keenista qooyska u codsan kartaa hooyada iyo/ama aabaha oo ku dhalay, walaalahaa wiilal iyo gabdho oo da’dooda yar tahay iyo xaaladaha qaarkood xitaa walaalahaa wiilal iyo gabdho oo da’dooda qaan qaar tahay. Taasi waxaa quseeyo geedi socod iyo shuruudo kale waxaana ku lamaanan halkaas kharash. Weydii warbixin fursadaha qofka kaa mas’uulka ah ama hagaha Hey’adda u Adeegta Qaxootiga.
Muddada ka daba safrista
Wakhtiga aad hesho oggoolashada joogitaan ee magangelyo, waa in aad saddex bilood gudahood marka laga tiriyo taariikhda ku taal go’aanka aad sameysaa codsiga isku keenista qooyska. Adiga nafsaddada ayaa mas’uul ka ah in aad soo gudbiso warbixinta saxa ah ee codsigaada. Maadama geedi socodka codsiga mid si adag iskugu dhafan yahay, waxa aad hagahaada (Hey’adda u Adeegta Qaxootiga) weydiisan kartaa caawinaad.
Shuruudaha isku keenista qooyska
Shuruudaha soo socda ayaa quseeya in aad oggolaasho u codsato xubnaha qooyskaada:
Waxa aad heysataa oggolaasho joogitaan magangelyo oo adiga shaqsi ahaan kuu gaar ah
Waa in aad gudaha muddada ka daba safrista (afka Nederland-ka: nareistermijn) in aad codsiga sameeysaa. Muddada ka daba safrista waa saddex bilood waxa ayna bilaabanaysaa taariikhda ku taal oggolaashadaada magangelyo. U fiirso: xitaa haddii wakhti dhow aadan la xiriirin xubnaha qooyskaada ama haddii ay lumeen waa in aad gudaha muddada ka daba safrista dhexdeeda aad codsiga keentaa.
Xubna qooyskaada waxa ay hore uga mid ahaayeen qooskaada markii aad dibadda joogteen. Taasi waxaa loo yaqaan xiriirka qooys.
Xubnaha qooyskaada waa in ay dokumenti ku xaqiijiyaan shaqsiyadooda iyo xiriirka qoys oo ay adiga kula leeyihiin. Kuwaasi waa in ay yihiin dokumenti dhaxal gal ah ay soo saaratay xukuumadda waddanka laga yimid.
Xubnaha qooyskaada waxa aad ku magacaawday inta uu socday geedisocodka magangelyo.
Ma u weydiisatay codsi ilmo da’yar mana ku harayaa waalidka kale oo kula dhalay ilmahaasi dibadda? Markaas waa in waalidka ka soo haray uu oggoolaasho bixiyaa in ilmaha u safri karo Nederland.
Soo ururi dokumentiga
Sida ugu dhaqsida badan u soo ururi dokumentiga codsiga looga baahan yahay. Dokumenti kala duwan ayaad u adeegsan kartaa caddeynta xiriirka qooys ama aqoonsiga, ka feker tusaale ahaan baasaboor, warqadda aqoonsiga, xaashida nikaaxa ama buugga qooyska. IND-da waxa ay ka dalban karaan dokumenti kala duwan waddankiiba. Kala tasho hagahaada (Hey’adda u Adeegta Qaxootiga) dokumentigee looga baahan yahay codsigaada. Adiga nafsaddada ayaa masúul ka ah in aad si wanaagsan oo wakhtiga gudihiisa ah aad dokumentiga u soo gudbiso. Taasi waxa ay aad muhiim ugu tahay habsami u hirgelinta geedi socodka codsigaaga.
Wakhtigee uu qaadanayaa geedi socodka codsiga?
Geedi socodka isku keenista qooyska waxa uu ka kooban yahay tallabooyin kala duwan. Hagahaada (Hey’adda u Adeegta Qaxootiga) ayaa tallaboyinkaas kugu caawini karo. Waxa ay qaadan kartaa dhowr bilood ilaa iyo sannad ka badan ka hor inta aysan Adeegga Migreshanka- iyo Dhalasho Qaadashada (IND) aysan go’aan ka gaarin codsigaada.
Wakhti hore ah jawaab uga bixi su’aalaha IND-da
Waa muhiim in aad wakhti hore aad jawaab ka siiso IND-da su’aalaha ku saabsan codsigaada. Ma heshay boosto ka socota IND-da? Ula tag markaa hagahaada (Hey’adda u Adeegta Qaxootiga).
Qooyskaada marka uu yimaado keddib
Haddii isku keenista qooyskaada la oggolaado ayna xubnaha qooyskaada ay u soo safraan Nederland, waa in ay iska xaadiriyaan xaruunta dejjin soo dhoweyn ee Ter Apel. Halkaas waxa ay joogaayaan inta badan afar maalin. Muddada jogitaankaa waxa xubnaha qooyskaada ay IND-da siineysaa oggolaasho joogitaan oo taada ku lammaansan, oo jiritaankiisa yahay shan sano. ‘Ku lammansan’ waxaa lagu jeedaa in joogitaankooda uu ku xiran yahay adiga oggolashaha algu siiyay.
Ma kaa ceshatay IND-da adiga oggolaashaha joogitaan magangelyo ama ma kuu dheereeyn weysay IND-da taasi? Markaasi IND-da waa ay ka ceshaneysaa xubnaha qooyskaada xitaa oggolaashada ay haysteen. IND-da waxa ay go’aan ka qaadaneysaa in ay heli karaan markaa oggolaasho joogitaan oo iskooda u gaar ah.
IND-da waa ay ka ceshan kartaa xubnaha qooyskaada oggolaashada joogitaan xitaa hadii xiriirka qooyska uu joogsado. Taasi wa marka xubnaha qooyskaada ay adiga wax xiriir ah kula lahayn. Ama haddii xubnita qoyskada yahay ilmo markaana sannad gudihiis uu iskiisa gooni u dego. Dhab ahaanta in aad wada noolaataan waa mid aad ku kallifan tihiin.
Ma rabaan xubnaha qooyskaada in ay codsi u gooni ah sameyaan, tusaale ahaan maadama ay sababo u gooni ah oo magangelyo leeyihiin? Markaa waxa ay arrinkaa xiriir kala sameyn karaan Hey’adda u Adeegta Qaxootiga.
Hey’adda u Adeegta Qaxootiga maxay kuu qaban kartaa?
Waxaan ku siineynaa warbixinta geedi socodka isku keenista qooyska iyo waxaan kuugu caawini karnaa buux buuxinta foomamka codsiga.
Waxaan innaga oo magacaada ku hadleyno inta uu socdo geedi socodka codsiga aan joogto kuugula xiriireynaa IND-da. Sidaasna waxaan kuugu garab geli karnaa ka jawaabista su’aalaha ay IND-da ka qabto xiriirka qooyskaada ama isku soo ururinta agabka caddeymaha.
Mararka qaarkood qeyb ka mid ah kharashka safarka soo aadista Nederland ee xubnaha qooyskaada ayaan ku siin karnaa. Ka wareeyso hagahaada maxaa macquul ah.
Haddii xubnaha qooyskaada ay yimaadaan Nederland oo guri idiin qalma la’idinka siiyo dowladda hoose, waa in hawlo badan oo wax qabasho ah la fuliyo. Ka feker codsiga daqliga dadka shaqo aan heysan iyo lacagaha garbgalka, iska qorista ceymiska caafimaaka iyo iska diiwaangelinta dhakhtarka qooyska, kan ilkaha iyo iskuulka. Wax badan adiga ayaa karo, lakiin xitaa caawinaad waad weydiisan kartaa.
Haddii codsigaada la soo diido waxa aan kugu caawini karnaa sidii aad qareen ku heli lahayd.
Buugga warbixinta oo ay ku yallaan tallaabo kasta ee geedi socodka codsiga isku keenista qooyska.